IPodcast kaGoogle iqala ukubonisa ukukhutshelwa kwezinye iziqendu | I-Androidsis
IPodcast kaGoogle iqala ukubonisa ukukhutshelwa kwezinye iziqendu
Ngokusungulwa kwesicelo seGoogle Podcast, ngoJuni ophelileyo kunyaka ophelileyo, inkampani yatsho njalo ubukrelekrele bokufakelwa buya kudlala indima ebalulekileyo kuphuhliso lwesicelo kunye nenkonzo entsha eyenze ukuba ifumaneke kubasebenzisi be-Android. NgoJanuwari, babhengeze ukuba bayasebenza ekukhutsheni iipodcast.
Ukurhangqa ii-audios ukuya kwisicatshulwa ngumsebenzi we-titanic onokubakho kuphela ngenxa yobukrelekrele bokufakelwa busetyenziswe kolu hlobo lwefomathi, esivumela fumana ngokukhawuleza izihloko ezinokuba nomdla kuthi kwisiqendu esinikiweyo, ngakumbi xa ipodcast ingadweliswanga ngezahluko.
Ukubhalwa kweepodcast akusivumeli nje kuphela ukufikelela kumxholo wepodcast ngendlela ekhawulezileyo ngaphandle kokunyanzelwa ukuba sibamamele, kodwa isivumela ukuba sikhawuleze ukufumana ulwazi esinokulufuna. Ukongeza, yeyona ndlela ilungileyo yokukwazi ukubonelela ngeziphumo ezingcono xa sisenza uphando oluthile okanye olucacisiweyo, ngaphandle kokuya kumanqaku esiqendu.
UGoogle usebenzisa iGoogle Cloud Speech-to-Text inkonzo, inkqubo leyo Uyakwazi ukwahlula phakathi kwamazwi amane okanye nangaphezulu ahlukeneyo nengxolo yangasemva iiyure ezimbini. Eli nqaku, nangona lingajoliswanga ngumsebenzisi, livumela uGoogle ukuba enze isalathiso ngokukhawuleza kwimixholo esinokuyifumana kwiifayile zeaudiyo ezikhoyo eqongeni, kuba uninzi lwee-podcast ezingazikhathazi ngokongeza amanqaku kwi-episodes ezilayishwe iqonga.
UGoogle, njengakwezinye izihlandlo, Ufike emva kwexesha kwiipodcast. Ukuzama ukubuyekeza oku, ujolise kwimizamo yakho ekuphuculeni ukusebenza kunye nokwandisa inani leempawu ezikhoyo. Kodwa njengesiqhelo, xa ushiywa lixesha, kufuneka wenze izinto ukuze abantu batshintshe isicelo sabo esiqhelekileyo se-podcast kule bheji intsha ivela kuGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » IPodcast kaGoogle iqala ukubonisa ukukhutshelwa kwezinye iziqendu
Eminye imigaqo esemthethweni ye-Samsung Galaxy A2 Core iyavela, isiphelo esisezantsi esilandelayo nge-Android Go